Tariro Kubhururuka kubva kuna Edelweiss kweTanzania Tourism High Mwaka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Tariro Kubhururuka kubva kuna Edelweiss kweTanzania Tourism High Mwaka
Tanzania Breaking News • Akasiyana Nhau
Tanzania Yekushanya Yakakwira Mwaka
rakanyorwa Adam Ihucha - eTN Tanzania
Ndege yezororo yekuSwitzerland, Edelweiss Air, yazivisa kuti iri kuwedzera Kilimanjaro, Zanzibar, neDar es Salaam, senzvimbo nyowani dzekuenda kuTanzania kutanga munaGumiguru wegore rino.
Idzi nendege nyowani dziri kupa mwenje wetariro kumabhizimusi ekushanya emunyika anosvika mabhiriyoni emadhora.
Edelweiss, hanzvadzi hanzvadzi yeSwitzerland International Air Lines, inhengo yeLufthansa Group.
Lufthansa ine vangangoita mamirioni makumi maviri evatengi munzvimbo yayo kutenderera pasirese, ichiunza nzira yekusvika kune vangangoita vafambi.
Kubva munaGumiguru 8, 2021, Edelweiss achange achibhururuka akananga kubva kuZurich kuenda kuKilimanjaro International Airport (KIA), musuwo mukuru kuenda kuTanzania kuchamhembe kwekushanya wedunhu, kaviri pasvondo, nevashanyi vekumusoro-soro vanobva kuEurope kunofadza mwaka wepamusoro wekushanya.
"Zvino inoenda kuZanzibar, asi kamwe chete pasvondo, nekuti kubva muna Gumiguru 12, 2021, kuchave neimwe ndege yekuenda kuDar es Salam pane rimwe zuva remigwagwa," Mutungamiriri Mukuru weSwitzerland Tanzania, VaAndré Bonjour, akaudza vashanyi vekushanya muTanzania guta rakasarudzwa re safari muArusha munguva pfupi yadarika.
Zvazvinomira, Edelweiss Air inopa maTanzania madhora 2.6 bhizimusi indasitiri yekushambadzira danho rekuzadzisa chinangwa chayo chekukwezva mamirioni mashanu evashanyi nekugadzira madhora mabhiriyoni matanhatu emari yekunze mu5.
"Kuwedzera nzvimbo nhatu kuTanzania munguva dzakaomarara, haisi vhoti yekuvimba nenyika chete, asiwo kukurudzira indasitiri yayo yekufambisa kuti izadzise tarisiro yayo yevashanyi vanosvika mamirioni mashanu muna 3," akatsanangura.
The Tanzania Association yeVashanyi Vanoshanda Sachigaro (TATO), VaWilbard Chambulo, vakati indasitiri yekushanya inogamuchira Edelweiss Air nemaoko maviri uye vakarumbidza nguva yacho.
Mukuru weTATO akawedzera: Tanzania nzvimbo kune vekumusoro-soro vekuSwitzerland nevamwe vatengi. ”